लेख/ साहित्य Archives - Page 26 of 33 - Purbeli News
प्रसंग महिनावारीको। आजकल आफुले आफुलाई कथित ज्ञानी भन्ने केही युवतीले अज्ञानताबश कथित आधुनिकताको नाममा "मैले त महिनावारी बार्न छोड़े नी" भनि बडो गर्वका साथ घोषणा गर्न थालेछन। इन्द्रिय तृप्ति नै मनुष्यको अंतिम लक्ष्य भएको आधारभूत शिद्धांतमा बिकशित भएको पश्चिमेली ज्ञानले लतपतिएकी युवतीको सोचाई अरु के नै हुन सक्ला र? सनातन धर्म शास्...
काठमाडौं । मयमनसिंहमा प्राइभेट कोठा नपाइए पनि ढाकामा पाइन्छ भनेर रुद्र भनिरहन्थ्यो । तर, म कसरी ढाका जान सक्थेँ र रेलमा चढेर एक्लै जान त सक्थेँ होला, तर घरबाट अनुुमति देलान् र अन्त्यमा सान्दाइ मयमनसिंह आएका वेला ढाका जान जिद्दी गरेँ । ‘पहिलो वर्षको जाँच पास गरेको प्रमाणपत्र लिन ढाका जान्छु,’ भनेँ । ढाका पुग्नेबित्तिकै ‘एकजना साथीलाई ढाका विश्वविद्...
काठमाडौँ । चम्पावती मावि, बुइपा, खोटाङका पूर्व प्रधानाध्यापक तथा साहित्यकार एकनाथ ढकालको आज बिहान ७५ वर्षको उमेरमा हृदयाघात भई यहाँ निधन भएको छ । काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गल लैजाँदै गर्दा उहाँको बाटैमा मृत्यु भएको थियो । सो माविमा करिब २२ वर्ष तथा काठमाडौँ र ललितपुरका विद्यालयमा करिब १९ वर्ष उहाँले अङ्ग्रेजी विषयमा अध्यापन गर्नुभएको थियो । हा...
काठमाडौँ । पारिजात स्मृति केन्द्रले आज चार स्रष्टालाई पुरस्कृत गरेको छ। केन्द्रको ‘पारिजात सृजन सम्मान’ बाट हेमनाथ पौडेल, ‘पारिजात सङ्घर्षशील नारी सम्मान’ बाट शशी श्रेष्ठ, ‘पारिजात कला सम्मान’ बाट श्याम तमोट र ‘पारिजात बाल-साहित्य सम्मान’ बाट विजय चालिसे सम्मानित भए। ती पुरस्कार जनही रु १० हजार राशिको छ। नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गाप्रस...
भट्ट र भण्डारीले पशुपतिको साँचो भारतीय दूतावासमा बुझाइएर राष्ट्रियतामाथि प्रहार गरेको दिन
म १७–२३ पुस ०६५ मा पशुपतिनाथको भट्ट भएको थिएँ । पशुपतिको पहिलो नेपाली भट्ट म नै हो । तर, राजनीतिक खिचातानी र भारतीय दबाबले सात दिनमा नै हटाइएँ । भट्ट हुँदा मैले हरेक दिन डायरी लेख्थेँ । त्यही डायरीलाई अहिले पुस्तकका रूपमा प्रकाशन गरेको हुँ । ‘पशुपतिमा सात दिन’ मैले सात दिन लेखेको डायरीको आधा भाग मात्र हो । पशुपति पूजाको लामो इतिहास छ । पहिला पशु...
क्षत्रीको यौन बिद्रोहका कथा लोकार्पित
काठमाडौं । पत्रकार डब्बु क्षत्रीको पहिलो कथा सँग्रह नमस्ते काठमान्डू पाठकमाझ आएको छ । राजधानीको कालिकास्थन स्थित सर्वनाम नाटकघरमा शनिबार त्यहीका कलाकारहरुले कथामाथि बनेको गीतमा अभिनय गर्दै पुस्तक सार्वजनिक गरे । सँग्रहका कथाको भाव समेटेर बनाईएको गीत नमस्ते काठमान्डू...पनि सोही कार्यक्रममा सर्वजनिक गरिएको थियो । जुगल डँगोलको सँगीत र सन्देश पाठकको स्...
पतिपत्नीको एउटा रोचक कथा ! यस्ता पति भाग्यमानी महिला हरुले मात्र पाउछन
पत्नीलाई विवाहको केही वर्षपछी आफ्नो दिमागमा केही कुराहरु आयो कि यदि उनले आफ्नो पतीलाई छोडेर गइन भने उसले कस्तो महसुस गर्छ होला यो विचार गर्न उनले एउटा कागजमा लेखिन “अब म तिम्रो साथमा बस्न सक्दिन, म दिक्दार भइसके तिम्रो साथमा बस्दा बस्दा , म घर छोडेर जादैछु संधैको लागि ” र त्यो कागजलाई उनले एउटा टेबलमा राखिन अनी जब उसको पति आउने समय भयो ...
ईन्टरनेट सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगमा रोक लागाउ
अहिले गाउँ समाज सहर बुढा बच्चा सबैमा एक प्रकारको भुत चडेको छ सामाजिक सञ्जाल अन्तर्गत फेसबुक , टुइटर हरु प्रयोग गर्न सम्बन्धमा , समाजिक सञ्जाल सजिलो छिटो आफ्ना आफन्त हरु संग भेट घाट गर्ने ठाउँ बनेको छ । एक अर्काका कुरा छिटोभन्दा छिटो संप्रेसण गर्ने गर्न कुरामा सामाजिक सञ्जाल धेरै उपयोगी हुँदै गएको छ । भर्खरै को घटना बिश्वब्यापी हुन अहिले केहिबेर लाग...
चुनावका मुखमा आएर प्रहरीले धमाधम गुन्डा नायिकेहरूलाई पक्रिँदै र थुन्दै छ । समाचारमा थुनेको समाचार आए पनि छोडेको समाचार गुपचुप बनाइँदै पनि छ । अघिपछि ती डन समाजमा असनका साँढेझैँ डुक्रिने गर्थे । चुनावी माहोल तात्दै जाँदा सरकारले तिनीहरूबाट चुनावी वातावरण खल्बलिने संकेतमा समातेको हो । मिहीन पाराले हाम्रो शासन नियाल्ने हो भने पनि देश गुन्डाले नै चलाएक...
टोलको एकजना शुभचिन्तक आन्टी प्रायः सोधिरहन्छिन्– हैन तिमी बिहेचाहीँ कहिले गर्ने नि?म अलि फिल्मी पारामा स्टाइल मारेर जवाफ दिन्छु– मन परेको मान्छे पो लोग्ने बनाउने नत्र सिंगलै ठीक। एकदिन आन्टीले ममीलाई भनेकी थिइन् रे, ‘तपाईंकी छोरी उत्ताउली छे, टेढो टेढो जवाफ दिन्छे।’ हो, म उत्ताउली भएँ। किनकी जीन्दगीको महत्वपूर्ण निर्णय बिहेलाई कसैले शालीनतासँग जोडे...